Trano narodana tetsy Antohomadinika: olona 7 tototry ny tany, 3 naratra mafy | NewsMada
Ankoatra ilay lehilahy tsy nahatsiaro tena tototry ny ranontany, nianjeran’ilay rindrin-trano eny Antohomadinika Atsimo, omaly, tsy latsaky ny dimy ireo olona naratra. Voa mafy tamin’izany ny olona telo.
Nitera-doza ny fandravana trano lehibe iray etsy Antohomadinika Atsimo, omaly maraina manodidina ny tamin’ny 8 ora. Nirodana tampoka ny rindrin-trano ka nianjeran’izany avokoa ny mpiasa sy ireo mpaka ranontany tao anatiny. Vokany, olona miisa fito naratra raha telo hafa naratra mafy. Lehilahy iray kosa tsy nahatsiaro tena ary voatery nalefa mihitsy teny amin’ny HJRA. Vokatry ny tsy fahaiza-manaon’ireo mpiasa tao anatiny ny nahatonga ny loza, raha ny filazan’ireo mponina eny an-toerana. « Mbola tsy tonga teny an-toerana ny tompon’andraikitra ny fandravana ilay tranobe. Ireo mpiasa tsotra sy ireo mpaka ranontany no efa niatrana teny an-toerana nanao ny asany avy. Antony nahatonga ny loza. Teny an-toerana ihany koa ny sarety miisa roa saika nitaterana ireo ranontany », hoy ny fanazavan-dRafaliarisoa Tsilavimandresy, sefo fokontany eny Antohomadinika Atsimo. « Nianjera tampoka ilay lavarangana amin’ny “béton” ka nilatsaka tamin’ireo sarety roa. Taorian’izay, nianjera tampoka sy nirodana koa ny rindrina ka nilatsahan’izany ireo mpaka ranontany », hoy ny filazan’ny mpivarotra iray eny an-toerana. Voa teo amin’ny tarehiny, ny tanany, ny tongony avokoa ny ankamaroan’ireo olona naratra. “Lehilahy iray kosa nalaina tao ambanin’ny tany ary nalemilemy tanteraka”, hoy hatrany ny fanazavany.
Tsy tonga teny amin’ny fokontany
Taorian’ny loza, niray hina niara-namoaka ireo tototry ny ranontany ny fokonolona sy ireo avy ao amin’ny BMH. Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa efa herinandro omaly ny fandrodanana natao. Tsy tonga eny amin’ny fokontany ny taratasy fangatahana mahakasika izany. « Ny fampahafantarana izany no tonga eto aminay fa tsy nisy fangatahana natao », hoy ny fanazavan’ny tompon’andraikitry ny fokontany.
“Tsy mahafantatra koa ny fisian’ireo mpaka ranontany teny an-toerana ilay teratany vahiny, tompon’ilay trano narodana nefa nanolotra fanampiana ireo niharam-boina eny amin’ny hopitaly izy”, hoy ireo mpivarotra eny an-toerana. Marihina fa olona avy eny Antohomadinika ireo mpikarama naka ranontany. Hamidiny indray izany avy eo hanotofana ireo tokotanin’olona. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, tsy mbola azo ivarotana manoloana ilay trano narodana hisorohana ny loza hafa. Ireo mpivarotra kosa, mitaraina ho tsy mahita toeran-kaleha hanaovany ny asany.